Mapisarema 75 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Kumutungamiriri. Mutinhimira unonzi, “Musaparadza.” Pisarema raAsafi.+ Rwiyo. 75 Tinokutendai, haiwa Mwari, tinokutendai;Zita renyu riri pedyo,+Uye vanhu vanozivisa mabasa enyu anoshamisa. 2 Munoti: “Pandinotara nguva,Ndinotonga ndisingasaruri. 3 Pakanyungudutswa nyika uye vagari vayo vese,Ndini ndakaita kuti mbiru dzayo dzirambe dzakasimba.” (Sera) 4 Ndinoti kune vaya vanozvirumbidza, “Musazvirumbidza,”Uye kune vakaipa, “Musakwidziridza simba renyu.* 5 Musakwidziridzira simba renyu* kumusoroKana kutaura muchizvitutumadza. 6 Nekuti kukwidziridzwa hakubviKumabvazuva kana kumavirira kana kumaodzanyemba. 7 Nekuti Mwari Mutongi.+ Anoderedza mumwe munhu, okwidziridza mumwe.+ 8 Nekuti muruoko rwaJehovha mune kapu;+Waini yacho iri kupupuma uye yakanyatsosanganiswa. Achatoidurura,Uye vakaipa vese vepanyika vachainwa, kusvikira kumasese acho.”+ 9 Asi kana ndiri ini, ndichazivisa nezvazvo nekusingaperi;Ndichaimba ndichirumbidza* Mwari waJakobho. 10 Nekuti anoti: “Ndichagura simba rese revakaipa,*Asi simba revakarurama richakwidziridzwa.”*
^ ChiHeb., “nyanga yenyu.”
^ Kana kuti “Ndicharidzira rwiyo.”
^ ChiHeb., “nyanga dzese dzevakaipa.”
^ ChiHeb., “nyanga dzevakarurama dzichakwidziridzwa.”